Film mafana mametaka an'i China ho an'ny mpanamboatra insole sy mpamatsy | H&H
Misy taratasy na tsia TSY
Hatevina / mm 0.015 / 0.02 / 0.025 / 0.035 / 0.04 / 0.06 / 0.08 / 0.1
Sakany / m / 1.2m-1.52m toy ny namboarina
Faritra mitsonika 40-60 ℃
Asa tanana asa milina fanindriana hafanana: 100-140 ℃ 5-12s 0.4mpa
Izy io dia sarimihetsika adiresy mafana TPU miempo izay mety amin'ny fifamatoran'ny PVC, hoditra vita amin'ny hoditra, lamba, fibre ary fitaovana hafa izay mila mari-pana ambany. Matetika izy io dia ampiasaina hanamboarana insol foam PU izay milamina amin'ny tontolo iainana ary tsy misy poizina.
Raha ampitahaina amin'ny fifamatorana lakaoly, ity vokatra ity dia mitondra tena tsara amin'ny lafiny maro toy ny fifandraisana evironment, ny fizotran'ny fampiharana ary ny fitehirizana vola lany. Ny fanodinana press-heat ihany no azo ahatanterahana ny lamination.
Azontsika atao ny manamboatra an'ity vokatra ity na tsy misy substrate, araka ny filan'ny mpanjifa. Matetika, milina fanosotra mihombo no ampiasaina hametahana ny lamosin'ny lamba. Ny ankamaroan'ny mpanjifa dia tsy mampiasa substrate, na ny mpanjifa sasany dia mila film misy substrate pe film rehefa mampiasa milina fanamainana fandriana fisaka. Afaka manome izany koa izahay. Ny sarimihetsika vita amin'ny TPU dia malefaka sy azo nosasana, izay manasongadina ny antony mahatonga an'ity vokatra ity halaza be. Ho fanampin'izany, ny ankamaroan'ity maodely ity dia horonana 500m, ny sakany mahazatra dia 152cm na 144cm, ny sakany hafa koa dia azo amboarina.
1. Fihetseham-po malefaka: rehefa apetraka amin'ny insole dia hanana akanjo malefaka sy ahazoana aina ny vokatra.
2. mahatohitra fanasana rano: mahazaka manasa rano farafahakeliny 10 farafaharatsiny.
3. Tsy misy poizina sy milamina amin'ny tontolo iainana: tsy hamoaka fofona tsy mahafinaritra izy io ary tsy hisy fiantraikany ratsy amin'ny fahasalaman'ny mpiasa.
4. Mora ny manodina amin'ny masinina sy ny fitehirizana ny vidin'ny asa: ny fanodinana milina fanosotra ho azy, mamonjy ny vidin'ny mpiasa.
5. Teboka malefaka: mifanaraka amin'ny tranga lamination toy ny lamba tsy mahazaka hafanana ambany.
Ins foam foam
Horonantsary mametaka mafana mihetsiketsika dia be mpampiasa amin'ny insamin lamination izay ankafizin'ny mpanjifa noho ny fahatsapany malefaka sy mahazo aina. Ankoatr'izay, ny fanoloana ny fametahana lakaoly mahazatra, ny sarimihetsika dity miempo mafana dia nanjary asa-tanana lehibe nanamboarana mpanamboatra fitaovana kiraro an'arivony nandritra ny taona maro.
Ny horonantsary mametaka hafanana L341B dia azo ampiasaina amin'ny tsihy fiara, kitapo ary valizy, lamination lamba. Raha mbola momba ny fampifamatorana ireo vokatra PU foam, dia misy vahaolana mifandraika amin'izany. Indrindra amin'ny fifamatorana ireo vokatra vita amin'ny foamed board dia efa matotra tsara ny vahaolana fampiharana an'ny orinasanay amin'ity faritra ity. Hatreto dia nahatratra fiaraha-miasa stratejika izahay niaraka tamin'ny orinasa mpanangom-bokatra maherin'ny 20 tao an-trano sy tany ivelany, ary ny fampiharana ny sarimihetsika adhesive melt mafana amin'ny sehatry ny valizy sy ny fitambaran-kitapo dia nahazo valiny tena tsara.
Teo aloha: Factory for Thermal Fusion Label Patch - sarimihetsika CPE ho an'ny apron CPE - HH
Manaraka: Lakaoly lakaoly nandrendrika TPU ho an'ny insole
Eva Hot Melts Web Film
Takelaka lakaoly mafana be
Tpu mafana mametaka Tpu mafana